Fitsidihana: Biraon’ny Vavolombelon’i Jehovah any Grande-Bretagne | Tenin’ny Tanana Malagasy (TTM)
Ahoana no fanaovana famandrihana? Tsindrio ilay hoe “Hamandrika Fitsidihana ho An’olona Latsaka ny 20”, raha tsy ampy 20 ny isanareo. Miantsoa kosa raha hamandrika fitsidihana ho an’olona 20 na mihoatra ianareo.
Hamandrika Fitsidihana ho An’olona Latsaka ny 20
Manara-maso ny fampianarana Baiboly ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ny tany maromaro, ohatra hoe Grande-Bretagne, Irlandy, ary Malta. Mandrindra ny fandikana boky ara-baiboly ho amin’ny fiteny maromaro, anisan’izany ny teny gaelìka ekosey, galoà, irlandey, ary tenin’ny tanana britanika. Mamokatra raki-peo sy video koa.
“Ny Lovantsika”: Tantaran’ny asa fitoriana any Grande-Bretagne sy Irlandy.
“Baiboly any Grande-Bretagne”: Misy Baiboly vitsy mpanana ao, ary hita ao koa ny tantaran’ny fandikana Baiboly nandritra ny taonjato maro.
Sampan’asa ao Amin’ny Betelan’i Grande-Bretagne: Misy video sy tabilao manazava ny asa atao ao amin’ny Sampan’i Grande-Bretagne.
Hizara Hizara Birao sy Fitsidihana: Grande-Bretagne
Birao sy Fitsidihana: Grande-Bretagne